Taliyaha Nabad ilaalinta Gobolka Abyee ee ay ku muransan yihiin labada Sudan oo loo magacaabay sarkaal kasoo shaqeeyay Soomaaliya. - Awdinle Online
Taliyaha Nabad ilaalinta Gobolka Abyee ee ay ku muransan yihiin labada Sudan oo loo magacaabay sarkaal kasoo shaqeeyay Soomaaliya.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa taliyaha cusub ee Ciidamada Nabad ilaalinta ee ku sugan Gobolka Abyee oo ay ku muransan yihiin Labada Suudaan u magacaabay Gen. Kefyalew Amde Tessema.
Xilkaan waxaa horay u hayay General Mehari Zewde balse la badalay, waxaana xilkaan loo magacaabay Tessema oo ah nin aqoon u leh dhanka Ciidanka, kana soo shaqeeyay waaxyo iyo dalal kala duwan.
Gobolkaan Abyee waxa ku sugan Askarta xiran Koofida Buluugga ah ee Howlgalka Nabad ilaalinta Qaramada Midoobay, Itoobiya ayaa qayb ka ah oo sababta loogu biirayay ayaa ah in ay Soohdin la leeyihiin Suudaan.
Saami wanaagsan ayay ku leedahay Askarta nabad ilaalinta oo gaarsiisay in ay hoggaanka markii labaad u qabtaan Ciidamada Qaramada Midoobay, maadaama shaqsiga ka degaya xilka iyo kan la wareegaya ay isku dal yihiin.
Kefyalew Made Tessema, sanadkii 2017-kii waxa uu si buuxda ugu mid noqday Guddiga difaaca Itoobiya, kadib si gaar ah waxa uu ugu sii biiray waaxda Injireeniyada iyo dajinta qorshaha Ciidamada ee Wasaaradda Gaashaandhigga.
Dhismaha Askartaan Qaramada Midoobay ayaa timid kamid markii Koofurta Suudaan ay ka go’day Waqooyiga, isu dhaca labada dhinac ee dhanka maamulka Deegaannada iyo rabshada aan dhammaadka lahayn ayaa sabab la’aan ka dhigtay in Golaha Ammaanka ay fasaxaan Askar la geeyo Xadka kala qaybiyo labada dal.
Waa kuma General Tessima?
General Kefyalew Adme Tessima sanadkii 2015-kii waxa madax ka noqday qaybta hoggaaminta howlgalada ururka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee loosoo gaabiyo AMISOM, waxaana uu qayb ka noqday qorshe dajiyaasha ururkaan.
Muddo kadib waxaa dib loogu celiyay dalkiisa, Dowladda ayaa u garatay in uu xubin ka noqdo Golaha Difaaca Qaranka Itoobiya, waa uu kasoo dhex muuqday ilaa loo weeciyo qaybta Injineeriyada ee Ciidamada Difaacada.
Dhanka Aqoonta waxa uu shahaadaha Maskartka qaybta maamulka iyo Ganacsiga ka qaatay Jaamacadda Ashland ee dalka Mareykanka, halka Shahaada heerka koowaad uu ka qaatay farshaxanka ee taliska iyo xakameynta unugyada militariga iyo sameynta akadeemiyada iskudarka awoodda ee Ruushka.
Previous articleHadal jeedinta Xaliimo Yaray iyo Todobaadka Xoriyadda Maxaa isku soo beegay?
Next articleDilkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay Muqdisho oo Taliska Booliska Somaliya ka hadlay